Wararkii ugu danbeeyey ee dagaalka ka dhex socda Al-Shabaab iyo Abuu Mansuur
August 11, 2017 - Written by Editor
Baydhabo:-Kooxda Al-shabaab ayaa maanta mar kale weerartay Saldhigga uu wadaadka Abu Mansuur Roobow ku leeyahay duleedka deegaanka Abal waxaana dagaalka uu socday mudo ka badan 2 saac waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro leh dhimasho iyo dhaawac .
Maleeshiyada Daacadda ah Abu Mansuur ayaa deegaano ka saaray Kooxda Al Shabaab oo shalay qabsaday tuulada Abal ee gobalka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya.
Al-Shabaab gurmad kala duwan uga yimid gobalka Sh /Hoose iyo Hiiraan waxaana ay caawa Al-Shabaab ku sugan yihiin degaanka Labaatan Jirow ka dib markii dib looga soo riixay deegaano ay shalay ku soo durkeen .
Wararkii ugu danbeeyey ee soo gaaray Halgan.net oo ay ka heshay ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Al-Shabaab iyo Abu Mansuur ay isku hub uruursanayaan Abu Mansuur waxaa uu taageero ka helayaa beeshiisa waxaana xaalada ay ku xuntahay Abu Mansuur oo u Dhexeeya ciidanka DFS ,Itoobiyaan iyo Al-Shabaab. Halka Al-Shabaab ay ka baqanayaan diyaarado dul heehaabaya Deeegaanada dagaalada ka socdaan.